Tababarkan waxaa loogu talagalay dhammaan dadka doonaya inay ku noolaadaan Faransiiska, ama hadda u guuray, oo doonaya inay wax badan ka bartaan habaynta iyo shaqada waddankeenna.
Anna iyo Rayan, waxaad ogaan doontaa tallaabooyinka ugu horreeya ee aad qaadi doonto inta lagu jiro rakibiddaada (sida loo furo xisaab bangi? Sida loo diiwaan geliyo ilmahaaga dugsiga?, ...), adeegyada guud ee kala duwan iyo faa'iidadooda, iyo tixraacyo wax ku ool ah ku noolow Faransiiska (sida loo wareego, waa maxay tillaabooyinka la qaado si aad shaqo u hesho? ...).
Samayntan todobada cutub adag saacadood 3 dhawr daqiiqadood oo isdaba joog ah oo aad arki karto oo aad dib u eegi karto xawaarahaaga iyo hadba baahidaada.
Waxay ka kooban tahay fiidyowyo isdaba-joog ah iyo waxqabadyo is-dhexgal ah. Kediska la bixiyo inta koorsadu socoto, waxaad qiimeyn kartaa aqoonta la helay. Natiijooyinkaaga laguma keydin goobta.
Ku noolaanshaha iyo helitaanka shaqo ee Faransiiska Diisambar 18, 2021Tranquillus
socdaHordhac makaanikada dareeraha